Cellulose ether Factory - China cellulose ether Abakhiqizi, abahlinzeki
1. I-HEMC hydroxyethyl methyl cellulose yenziwa nge-highly pure cotton cellulose. Ngemuva kokwelashwa kwe-alkali kanye ne-etherification ekhethekile iba yi-HEMC. Ayinamafutha ezilwane nezinye izinto ezisebenzayo.
2. Ukubukeka kwe-HEMC kuyizinhlayiya ezimhlophe noma i-powder, ayinaphunga futhi ayinambitheki. I-hygroscopic futhi ayikwazi ukuncibilika emanzini ashisayo, i-acetone. i-ethanol ne-toluene. Ngemuva kokuvuvukala emanzini abandayo kusixazululo se-colloidal, ukuncibilika akuthinteki inani le-PH. Iyafana ne-methyl cellulose, kepha ngokwanda kwamaqembu e-hydroxyethyl, inokubekezelelana okuningi, incibilika kalula emanzini futhi inezinga lokushisa eliphakeme kakhulu.
1. I-MODCELL Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC), ayina-ionic cellulose ethers ekhiqizwa kuselulose yemvelo ephezulu (ukotini ohlanziwe) ngochungechunge lokuphendula kwamakhemikhali. Ingancibilika emanzini nganoma yisiphi isilinganiso, ubukhulu bayo, ukugxila kuncike kwi-viscosity yabo.
2. Zinezici ezinjengokuncibilika kwamanzi, impahla egcina amanzi, uhlobo olungeyona i-ionic, inani le-PH elizinzile, umsebenzi womhlaba, ukuphinda kuxazululwe kokuxazululwa kwe-gelling ezingeni lokushisa elihlukile, ukuqina, ukwenza ifilimu ukwakha, ukuthambisa impahla, ukumelana nesikhunta njll.
3. Ngazo zonke lezi zici, zisetshenziswa kakhulu enqubweni yokuqina, ukufaka ijeli, ukumisa ukumiswa, kanye nezimo zokugcina amanzi.